High Precision 1060 3003 Aluminum Round Disc, H22 Metal Stamping Circular Aluminum Plate - Zhejiang Shuanglin Jiate Metal Technology Co., Ltd
Noho ny maha-lehibe indrindra ny indostrialy dia voafatotra izahay amin'ny famokarana vondron'olona marobe amin'ny alim-by ho an'ireo mpanjifanay manana voninahitra. Ny vokatra azonay dia novolavolain-dry zareo matihanina mampiasa teknika misimisy sy fitaovana tsara indrindra azo avy amin'ny mpivarotra azo itokisana. Noho ny fangatahana avo lenta, ny vokatra azonay dia misy amin'ny fomba maro samihafa.
Nampiasaina tamin'ny famokarana:
Aluminium Deep Aluminum.
Misy amin'ny 6 amin'ny 42 Inch.
Fahatapahana hita ao amin'ny 6 ka hatramin'ny 23 Gauge.
Fanamarinana: ISO / ROHS / SGS
Toerana nahaterahana: Sina
Fepetra takiana minitra: Fifampiraharahana
Fahafahana: 1000Ton isam-bolana
Fandefasana fotoana: 7-35 andro
Packaging Details: Fonon'ny palettes na hazo
Thickness: ambonin'ny 0.5mm
Ampidiro: 18inch 20inch 22inch sy Etc
Fampiharana: Panitra manala, Milk pan, Fry Pan
3. Ny rindrin-damosin'ny alim-by / disk / disk dia tena madio tsy misy loto.
Manana rafitra henjana sy matihanina amin'ny famokarana izahay:
1> mialoha ny famoronana:
Fanekena ny fanarahana ny fenitra sy ny fitaovana
Araka ny baikon'ny mpanjifa;
Famolavolana drafitra famokarana mifanaraka amin'ny baikon'ny mpanjifa;
Manomboka mamokatra rehefa mandray ny fandoavam-bola avy amin'ny mpanjifa
2> Vokatra vita:
Ny fitsapana simika sy ny fitsapana mahazatra amin'ny alàlan'ny fitsaboana kalitao,
Didy mismisma (Continous Ultrasonic)
Lenght control control.
Fahamoram-pahavoazana, fandrefesana, fanaraha-maso ny fandrefesana sy fisainana
3> fanamarinana alohan'ny fandefasana:
Fanaraha-maso amin'ny fonosana
Fankatoavana ny fanekena
Fanaraha-maso ny marika sy ny isan'ny marika
Decoiler → Accumulator → Fiatrehana tetezana → Asidra sy alkali mpanadio → Fanasitranana → Famerenana ny fiovan'ny toetr'andro → Fandaharam-panafody raitra → Fanolorana fantsom-pahasalamana → Fotopampianarana maina → Fofana fanasitranana fantsona → Fandefasana horonantsary fimailo → Fidiram-bola fivoahana → Fisakanana → Punch - Alim-borona
Fanaterana fitaovana fanenana
Takelaka ambanin'ny tany tsy misy ratra.